Saraakiisha Ahlu-sunna Ee Gobalka Gedo Oo Sheegay In Al-shabaab Dhabar Jab Ay Ku Tahay Is Dhiibitaankii Sakariye Ismaaciil (Dhageyso) – Goobjoog News
Saraakiisha Ahlu-sunna Waljameeca ee gobalka Gedo ayaa sheegay in dhabar jab xoogan ay ku tahay Al-shabaab is dhiibitaankii dhawaan ee uu is dhiibay Sarkaal ka mid ahaa Ururkaasi, kaa oo lagu magacaabo Sakariye Ismaaciil.
Sheekh Isaaq Mursal oo ka mid ah saraakiisha Ahlu-sunna oo u waramay Goobjoog Fm ayaa sheegay in tani ay sahli karto in guud ahaan gobalka Gedo Al-shabaab looga saaro si sahlan.
“Howlgalkeena ayeey tani dhiira gelinaysaa, waayo waxaa cad in Al-shabaab hadda ay kala jabeen, sarkaalkaasi is dhiibayna howl muhiim ah ayuu u haayay” Ayuu Yiri Sheekh Isxaaq.
Dhanka kale Sarkaalkaan ka tirsan Ahlu-sunna Waljameeca ayaa sheegay in uu jiro khilaaf soo kala dhex galay Xarakada Al-shabaab ee ku sugan degmada Baardheer, taasi oo uu ku tilmaamay in faa’ido u tahay ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa Ahlu-sunna Waljameeca.
Sheekh Isaaq Mursal ayaa ugu dambeyn sheegay in dhawaan ay qaadi doonaan duulaano uu ku micneeyay in ay ku xureyn doonaan dhamaan deegaanada gobalka Gedo ka joogaan Al-shabaab.
Somaliland: Dhallinyaro Shaqo Abuur Loo Sameeyey
Waalidkii Dhalay Marxuum Caasho oo Ka Hadlay Dilka Kuwii Kufsaday
Madaxweyne Xasan Sheekh”Dadka Mooshinka Wada waa la garanayaa taariikhda ay Soomaaliya ku dhex leeyihiin dhinaca siyaasadda”
Jowhar: 200 Oo Qof Oo Uu Soo Ritey Cudurka Shubanka
Tvciqo qsnnww cialis 5mg cialis without prescription...
Waeghv elntob cheap cialis best place to buy cialis online...
Fsavct xevhhi sildenafil 100mg levitra vs cialis...
Vabwyt iylpxj discount viagra cialis canada...